कोरोना परीक्षणमा प्रश्न ? ३ अस्पतालमा नेगेटिभ, एउटामा पोजेटिभ, विरामीको खल्ती साफ – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना परीक्षणमा प्रश्न ? ३ अस्पतालमा नेगेटिभ, एउटामा पोजेटिभ, विरामीको खल्ती साफ
काठमाडौं, पछिल्लो समय नेपालमा को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) को सं’क्रमण छ/छैन भनेर पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । अस्पताल पिच्छे भिन्दा–भिन्दै रिपोर्ट आउन थालेपछि पीसीआर परीक्षणको गुणस्तरमा तीब्र रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
सोही प्रकृतिको घ’टनाले पी’डित बनेका छन्, रौतहटका अफ्ताव आलम मेकरानी पनि । सामान्य ज्व’रो र श्वासप्रश्वासमा स’मस्या आएपछि आफ्ताव काठमाडौंको कलंकीस्थित नेपाल नेशनल हस्पिटल पुगेका थिए ।
नेपाल नेशनल हस्पिटलले उनको स्वाब संकलन ग¥यो र परीक्षणका लागि आफ्नोमा ल्याब नभएको भन्दै सानेपास्थित स्टार अस्पताललाई स्वाब पठायो । स्टार हस्पिटलले यही भदौ १९ गते पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ रहेको प्रमाण–पत्र थमायो ।
तर, को’रोना रिपोर्ट नेगेभिट आएपनि आफ्तावको स’मस्या कम भएन । त्यसपछि उनलाई झन शं’का लाग्न थाल्यो र दुई दिन पछि (भदौ २१ गते) पुनः परीक्षणका लागि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, टेकु पुगे । तर, त्यहाँ पनि अफ्तावको रिर्पोट नेगेटिभ नै आयो ।
दुई–दुई वटा अस्पतालले को’रोना नेगेटिभ रिपोर्टको प्रमाण–पत्र थमाए पनि अफ्तावको स्वास्थ्य स’मस्या कमी आएन । त्यसपछि अफ्तावलाई को’रोना परीक्षणप्रति झन शं’का लाग्न थाल्यो । त्यसपछि आफन्तकै सल्लाहमा उनी भदौ २३ गते ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पुगे ।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले भने वि’रामी भनिएका अफ्तावलाई सीधै भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु ग¥यो । त्यसपछि को’रोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन पनि ग¥यो । मेडिसिटीमा भने अफ्तावको रिपोर्ट पाजेटिभ आयो । यसरी अफ्तावको को’रोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएसँगै मेडिसिटीले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै टोखास्थित ग्राण्डीमा रिफर ग¥यो । टेकु अस्पताल जाने भनेपनि मेडिसिटीले जबरज’स्ती ग्राण्डी पठाएको वि’रामी अफ्तावका भाई मुन्ना अन्सारीले बताए ।
उनले भने, ‘अब यहाँ हामीले राख्दैनौं । अन्तै व्यवस्था मिलाउनुस् । हामीले इलाज पनि गर्दैनौं । हाम्रो नन् कोभिड अस्पताल हो, भने ।’ त्यसपछि १७ घण्टा उपचार गरेको मेडिसिटीले दुई लाख ९७ हजारको बिल थमायो ।
केही नभनीकन बिल तिरेर अफ्तावलाई टोखास्थित ग्राण्डी अस्पतालमा लगियो । तर, ग्राण्डीले गरेको को’रोना रिपोर्ट पुनः नेगेटिभ आयो । यसरी ५/६ दिनको अविधिमा ४ वटा अस्पतालले को’रोना परीक्षण गर्दा ३ वटा नेगेटिभ र १ वटा पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि अफ्ताव अस्पतालकै ला’परबा’हीले पी’डित बन्न पुगेका छन् । हाल उनको ग्राण्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
ह’तियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीयलाई गो’ली हा’नी नि’यन्त्रणमा लिइयो